> Resource > Transfer > PC in Transfer File iPad: Music Transfer, Videos, Photos si fudud loo iPad
Waa lagama maarmaan in ay PC ah in iPad qalab kala iibsiga file. Markaas, aad wareejin karaan faylasha, sida music, videos, sawiro, si aad iPad waqti kasta. In kasta oo aad qaban karto Lugood, aad waayi doonto music, videos, iwm aad iPhone. Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waxaa dajiyaan karaa oo keliya ma aha music, videos, sawiro iyo ka badan si aad iPad, laakiin sidoo kale sii xogta aad hore iPad.
Download PC si iPad software kala iibsiga u leedahay in isku day ah!
Fiiro gaar ah: Halkan, aynu isku dayi version Windows - Wondershare TunesGo. Iyadoo version Mac ah, kuu soo gudbin karaa music, videos iyo sawiro ka Mac in iPad.
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan iPad la kombiyuutarka via cable USB ah. Tani file iPad kala iibsiga ka qalab PC si buuxda u la jaan qaada mini iPad, iPad bandhigay isha, New iPad ayaa, iPad 2 iyo iPad marka ay ordaya macruufka 6/7/5. Markaas, ordo barnaamijkan on your computer. Ka dib markii barnaamijkan ogaadaa aad iPad, waxaad ka heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah ee hoos ku.
Tallaabada 2. Computer si ay iPad qalab kala iibsiga file: files kala iibsiga si iPad
Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida loo wareejiyo music, videos iyo sawiro iyo ka badan si aad iPad mid mid.
Guji "Media" geedka buugga bidix. Waxaad ka heli doonaa line sarre ee xaq. Si aad u dajiyaan music, waxaad riixi kartaa "Music". Markaas, guji saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos. Dooro files music aad doonayso ama folder music. Iyaga dejinta si aad iPad.
Si aad u dajiyaan videos, waxaad riixi kartaa "Movies". Sidoo kale, guji saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo TunesGo, waxa kale oo aad dajiyaan karaa podcast, Lugood U, videos music iyo ka badan si aad iPad.
Haddii aad u badbaadiseen playlists badan on your computer, aad iyaga wareejin karaan in aad iPad. In geedka buugga bidix, guji "playlist". Daaqadda playlist, riix saddexagalka "Add"> "ka Computer dar playlist" hoos. Suuqa kala file browser A booda. Dul meeshii aad ku badbaadi playlist ka dibna u soo dhoofsadaan.
Music iyo videos sokow, PC in iPad kala iibsiga oo aan qalab Lugood awood aad u dajiyaan photos iyo sidoo. Guji "Sawirro" geedka buugga bidix. Markaas, oo dhan albums waxaa lagu soo bandhigaa xaq.
Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan album ah, guji saddexagalka "Add" ku hoos iyo dooran "Add Folder". Raadi album oo ku soo dhoofsadaan. Waa hagaag, haddii aad doonayso in aad ku darto sawirada qaar ka mid ah, ayaa dooran album ah oo ku saabsan iPad si loo badbaadiyo sawirrada. Ama waxaad riixi kartaa "Add" in la abuuro hal. Fur album oo guji "Add" mar kale. Dooro photos doonayay oo iyaga soo dhoofsadaan.
Tani PC in iPad qalab kala iibsiga file gelineya inaad si aad iPad wareejiyo xiriirada ka file vCard, Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail, iyo Windows Cinwaanka Book aad.
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, version Mac ma taageeri soo degida playlists iyo xiriirada ka PC in iPad.
Way fududahay in la wareejiyo files ka computer si iPad la TunesGo, soo maaha? Intaa waxaa dheer, barnaamijka ayaa sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music, videos, podcast, Lugood U, iyo ka badan si aad PC iyo Lugood. Sidaas darteed, sababta aan download it in ay isku dayaan on wixiinna?